पाहुना चराले मनमोहक जगदीशपुर ताल- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ११, २०७४ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — विश्व सीमसार क्षेत्र जगदीशपुर ताल पाहुना चराले भरिन थालेको छ । अहिले यहाँ हिउँदे प्रजातिका रुख सुडसुडिया, चिमचिमे र जल रंक चराचुरुंगी आएका छन् ।
असोज अन्तिमदेखि फाटफुट्ट आउन थालेका चराले ताल भरिन थालेकोछ । तालमा अहिले ३ हजार ५ सय बढी चरा आईसकेको वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बरालले बताए । तालमा उत्तर तिरबाट दैनिक जसो सय देखि २ सय बढी पाहुना चरा आउने गरेको स्थानीय यमलाल उपाध्यायले बताए ।
तालमा सबैभन्दा बढी मरुल चरा आएका छन् । त्यसको संख्या ३ हजार बढी छ । त्यस्तै खडखडे, सिलसिले हाँस, कालीजरे हाँस र मालक हाँस आएका छन् । यी चराको संख्या ३ सयदेखि ५ सय सम्म रहेको छ ।
त्यस्तै सुईरोपुच्छ्रे चरा, बेल्चाठुडे हाँस, सिन्दुरे हाँस र कैलो टाउके हाँस पनि आएका छन् । यी चरा पनि ५ सयको संख्यामा रहेका छन् । महत्वपुर्ण त विश्वमै दुर्लभ हरि हाँस तालमा प्रसस्त देखिएका छन् । उक्त चरा पश्चिमको घोडाघोडी ताल पछि सबैभन्दा धेरै २ सय ५० को संख्यामा यहाँ देखिएको हो । चराविद् डा. बरालले अवलोकनका क्रममा उक्त संख्यामा चरा देखेको बताए । राम्रो कुरा त कम देखिन थालेको हरि हाँस एकै ठाउमा ठूलो संख्यामा देखिनु खुसीको कुरा भएको बताए ।तालमा ३० प्रजातिका चरा आएका छन् ।
नेपालको तराई तिर चिसो सुरु हुन थालेपछि उत्तरबाट यहाँ चरा आउन लागेका हुन् । उनीहरु यहाँ जाडोका महिना असोजदेखि माघ अन्तिमसम्म बस्ने गर्दछन् । त्यस्तै अबको एक सातामा वनक्षेत्रमा बढी बस्ने फिस्टाका दुई तीन प्रजाति सयौ चरा यहाँ आई पुग्ने बरिष्ठ चराविद् डा. बरालले बताए । उनले त्यस्तै घासे मैदान मनपराउने ट्याकटयाके र टिकटिक पनि साता दश दिनमा सयौंको संख्यामा जगदिशपुर पुग्ने बताए । त्यस्तै दुर्लभ प्रजातीको चील, महाचील, सारश पनि उताबाट उडी सकेर अब तीन/चार दिनमा यहाँ पुग्ने उनले बताए ।
यहाँ साइबेरिया, रुस, चीन, मंगोलिया, मध्य एशियाका तुर्केमिनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट यहाँ चराहरु आउने गरेको वरिष्ठ चराविद् डा. बरालले बताए । ती देशहरुमा बढी जाडो हुने भएकाले चरा जाडो छल्न नेपालको तराईतिर आउने गर्दछन् । त्यस्तै जाडोका बेला पर्ने हिउँले उनीहरुले आहार नपाउँदा पनि चरा यता आउने गरेको पनि उनले बताए । चरा यहाँ गर्मी हुन थाले पछि फेरी उतैतिर फर्कने गर्दछन् ।
चरा सातादेखि १० दिनसम्म लगाएर यहाँ आउने गर्दछन् । करिब ४ देखि ५ हजार माईल उडेर चराहरु यहाँ आउछन् । धेरै चरा सिधै उडेर ३–४ दिनमै पुग्छन् भने कतिपय चरा रोकिँदै साता लगाएर यहाँ पुग्ने उनले बताए ।
सदरमुकाम तौलिहवादेखि करिव ११ किमी उत्तर कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ९ मा पर्ने तालमा गत वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि धेरै चरा आउने संकेत देखिएकोमा निक्कै खुसी छु भन्छन् गाविसका पुर्व अध्यक्ष अब्दुलरसिद मुसलमान । चरा आबागमनले पर्यटक निकै रोमाञ्चित हुन्छन् उनले भने यस्ले गर्दा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हुन्छ ।
निकै आकर्षण र मनमोहक देखिने तालमा चराको जलविहार, चिरबिराहट र कलरव जलक्रिडाले मानवीय जीवनलाई रोमाञ्चित वनाउने हुँदा यहाँ स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरु निक्कै लोभिने गर्दछन् ।
तालमा सिमसारमा आश्रित ६१ प्रजातिका र अन्य ५७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । त्यस्तै विश्वमै दुर्लभ मानिएका ७ प्रजातिका चराहरु पाइने कुरा नेपाल पंक्षी संरक्षण संघले जनाएको छ । १ सय ५७ हेक्टरमा फैलिएको ताल कृत्रिम रुपमा बनाइएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो ।
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७४ १६:३४
झरना र साम्राज्ञीलाई अष्ट्रेलियामा रेड कार्पेट
मंसिर ११, २०७४ नारायण खड्का
अष्ट्रेलिया — नेपाली चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–२’ अष्ट्रेलियामा हाउसफूल प्रदर्शन भइरहेको छ । उक्त चलचित्रको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आएका नेपाली नायिकाद्वय झरना थापा र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई यहाँका चलचित्रप्रेमीले भब्य स्वागत गरेका छन् ।
नेपाली चलचित्रको राम्रो बजार बन्दै गएको अष्ट्रेलियामा यस चलचित्रले राम्रो बजार लिन सफल बनेको वितरकले दाबी गरेको छ । चलचित्रको प्रदर्शनमा यहाँ आइपुगेकी निर्देशक झरना थापा र नायिका साम्राज्ञीलाई कार्यक्रमस्थलमा रेड कार्पेटमा स्वागत गरिएको थियो । रेड कार्पेट शोमा सहभागिता जनाउन आएका उनीहरुले दर्शकहरुसँगै बसेर चलचित्र हेरेका थिए । कार्यक्रममा अहिलेकी चलेकी नायिका साम्राज्ञी र झरना दुवैले दर्शकको ध्यान तानेको थियो भने नायिका थापाको निर्देशकीय क्षमता र कलाकारहरुको अभिनयको समेत दर्शकहरुले तारिफ गरेका थिए ।
सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबन र तास्मानियामा हुने चलचित्र प्रदर्शनमा सहभागिता जनाइरहेका उनीहरुले अष्ट्रेलियाका नेपालीहरुले देखाएको माया र सम्मानप्रति खुशी ब्यक्त गरे । उनीहरुले अष्ट्रेलिया नेपाली चलचित्रका लागि राम्रो बजार बन्दै गएको बताउँदै नेपाली कलाकार र चलचित्रहरुलाई सँधै माया गरिदिन आग्रह समेत गरे ।
तास इभेन्टस र हो र हैन होला इभेन्टसले संयुक्त रुपमा ल्याएको उक्त चलचित्र यहाँका सबै शहरहरुमा प्रदर्शन गरिने आयोजक संस्थाका रोशन भट्टराईले जानकारी दिए । झरना थापाको निर्देशन र सलिम बानियाँ, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, सलोन बस्नेत, बुद्धि तामाङ्गलगायतको भुमिका रहेको छ । चलचित्र यहाँको सिड्नी, तास्मानिया र एडिलेडमा सफल प्रदर्शन भइसकेको र चाँडै ब्रिसबन, पर्थलगायतका शहरहरुमा समेत प्रदर्शन गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘बाघको बच्चा देखें’
काबेली 'बी' का कारण पुल जोखिममा
लोपन्मुख धातु उद्योग
राज्यले बेवास्ता गरेको माझी समुदाय